Xulka 17-jirada oo soo dhaweyn heer hoose loo sameeyay
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciyaartoyda Xulka 17-jiradda ayaa maanta gelinkii hore dib ugu soo laabtey magaalada Muqdisho kadib markii ay kasoo qeyb-galeen ciyaaraha bariga iyo bartamaha Africa, oo ay guul taariikhi ah ka gaareen.
Baraha bulshada [Social media] ayaa waxaa qabsadey hadal-heynta sawirro lasoo geliyay, oo muujinaya ciyaartooyda da'yarta oo Mooto Bajaaj-ta ka raacaya banaan Sahafi hotel, oo guryahooda ku aadaya.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo wafdigiisa oo safar Belgium ugu socday ayaa ku salaamay dhalinyarada Garoonka Aadan Cabdulle, halkaasi oo Basaskii dhawaan dowladda Qadar keentay looga soo qaadey, kadibna lagu daadiyay Lambar Afar [KM4].
Dhalinyaradan ayaa iyagoo niyad jabsan qofba halkii uu deganaa u raacay Bajaaj markii ay la kulmeen wax ka duwan soo dhaweyntii madaxda dowladda u balan-qaadaysay markii ay ku sugnaayeen Burundi.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Yariisow ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xulka da'yarta ay heli waayaan soo dhaweyntii ay mudnaayeen, isagoo intaasi ku daray inay baarayaan inay Bajaaj raacaan.
Waxaa sidoo kale baaqatey caawa xaflad soo dhaweyn ah, oo lagu waday in xulka 17 jirada loogu sameeyo xarunta dowladda Hoose ee Xamar, waxaana dhalinyarada lagu wargeliyay inay guryahooda ku laabtaan, iyadoo aan sababta la ogeyn.
Xulka da'da yar oo dhamaantooda laga soo xulay Muqdisho, ayaa kaalinta labaad ka galay Koobka CECAFA-U17, kadib markii 2-0 looga adkaaday ciyaartii Final-ka oo ay la ciyaareen xulka dalka Tanzania 29-kii April.
Madaxweyne Farmaajo ayaa u balan-qaadey dhalinyaradan in soo dhaweyn heer sare ah loo sameyn doono markii ay Muqdisho kusoo laabtaan.
Farmaajo iyo Nkurunziza oo shir degdeg ah isugu yeeray dalalka Ciidanka ka jooga Soomaaliya
War Saxaafaded 20.02.2019. 00:25
Burundi ayaa kamid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya kuwaasoo la...
Soomaliya 11.04.2019. 20:33